Lavazza Tiny Igwe Espresso - Imewe Mmewe
Igwe Espresso Obere igwe espresso nwere enyi na-eweta ọmarịcha kọfị totali n'ụlọ gị. Ihe okike a bu nke obi uto n’ime ime obodo nke ndi Malite - nke nwere ihe nlere nke ulo a bu nke otiti - na-a colorsu mme ucha di iche ma tinye edebe iwu Lavazza na ichoro. A na-eme shei bụ isi site na otu ibe ma nwee ntụ dị nro ma na-achịkwa ya kpọmkwem. Central crest na-agbakwụnye ihe nlere anya na usoro ihu ihu na -emepụtakwa isiokwu kwụ ọtọ mgbe ụfọdụ na ngwaahịa Lavazza.
Aha oru ngo : Lavazza Tiny, Aha ndị na-emepụta ya : Florian Seidl, Aha onye ahịa : Lavazza.
Igwe Espresso Florian Seidl Lavazza Tiny